Vateveri venhabvu vayambira maGreen Machine eCaps United kuti vasadherere vashanyi ve Al Ahly Tripoli, Libya, avo vari kutatarika mumakundano eCaf Champions League mumutambo wavo muNational Sports Stadium neChishanu.
Vanofarira nhabvu munyika vanoti Caps United haifanire kutarisira Al Ahly Tripoli pasi sezvo chikwata ichi chichiziva kuti kukundwa muZimbabwe kuri kureva kusvika kumagumo kwenzira yavo yemakundano eCaf Champions League egore rino.
Munyori wenhau dzemitambo mubepa nhau reNews Day, Tawanda Tafirenyika, anoti verushinji vasatarisire mutambo wakapfava paAl Ahly Tripoli sezvo chikwata ichi chiri kuda kuita mbiri nekusvika mumakota fainari kekutanga mumakwikwi aya.
Muteveri weMakepekepe, VaTafadzwa Mufundisi, vanoti Caps United haifanire kudhererera Al Ahly Tripoli nekuti kuita mangange kwayakaita neZamalek kuri kuratidza kuti hayiasi yekutarisira pasi.
Asi VaMufundisi vanofunga kuti Makepekepe anokunda asi kwete nezvibodzwa zvakawandisa sezviri kudiwa, asi 1-0 chete.
Chikwata chekuLibya ichi chakaratidza kuti hachisi kutamba nemutambo uyu mushure mekusvika muHarare neMuvhuro, mazuva mana mutambo wavo usati watambwa.
Asi Makepekepe anofanira kukunda mumutambo uyu kunyange 1-0 zvayo kuti varambe vari munzira yekuenderera mberi nemakundano.
Vanotungamira chikwata ichi vadzikisa mari inobhadharwa pagedhe kubva pamadhora mashanu ayo vanga vachishevedzera mumitambo yakadai, kusvika pamadhora matatu.